Fampielezan-kevitra… andraisana andraikitra | NewsMada
Fampielezan-kevitra… andraisana andraikitra
Nanomboka io maraina io, tamin’ny 6 ora, ny fampielezan-kevitra amin’izao fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna izao. 20 andro ny faharetan’izay, fa hifarana ny 25 novambra. Amin’ny 27 novambra ny fandatsaham-bato. Hanao ahoana? Amin’izao, saika mahabe resaka mandrakariva ny hoe fizarana sy fahazoana zavatra; eny, na fampielezan-kevitra aza no atao.
Nefa ny hevitra no tena tokony haely sy horaisana amin’izao. Ao anatin’izany ny foto-kevitry ny mpirotsa-kofidina hampandrosoana ny kaominina sy ny fiainan’ny vahoaka eny ifotony. Miara-dalana amin’izany ny vinam-piarahamonina, ny fandaharanasa, ny fomba fiasa, ny fanatanterahana; eny, na hatramin’ny tetiandro famitana ny asa aza. Aiza ho aiza ireo mpirotsa-kofidina?
Misy amin’izy ireo, ohatra, no efa ny tsara omana, manana ny vonona. Ny fifidianana sisa no andrasana? Avy eo, hiroso amin’ny fanatanterahana asa avy hatrany rehefa tonga tokoa ny tokoa: fahalaniana. Eo ny mpifidy handinika sy hampitaha ny fandaharanasan’ireo mpirotsa-kofidina, hisafidy ankahalalahana, hiaro ny safidiny hatramin’ny farany… Vonona amin’izany ny mpifidy?
Ho tena fifidianana fandraisana andraikitra amin’ny maha olom-pirenena sy ny fiatrehana ny raharaham-pirenena, na eo anivon’ny kaomanina misy ny tena ihany aza no hatao, fa tsy ho fahazarana na fombafomba: farany vao hikoropaka, na halefalefa ho azy amin’izao, sanatria. Homen-danja ny safidy: zo tsy amidy na vidina. Miankina amin’ny atao ihany no mahasoa na maharatsy izay.
Mandritra izao fampielezan-kevitra izao àry, ny hevitra tokoa no aely sy andrandraina horaisina fa tsy zavatra hafa. Tsy vitan’izany, ny hevitra tokoa no hampiadiana sy miady fa tsy ny olona, sanatria. Ho hita eo… Ny tsy manan-kevitra no mandresy lahatra na te haka ny fo sy ny vaton’ny mpifidy amin-javatra hafa. Tsy efa karazany ampy hitsarana ny mpirotsa-kofidina ve izany?
Mila miova fihetsika amin’izay ny mpifidy amin’izao, raha tena hanova ny tanàna misy azy ho marin-toerana amin’ny fampandrosoana?